မိုင်းတုံမြို့တွင် နမ့်တုံချောင်းရေလျှံမှုကြောင့် (၅)နာရီဝန်းကျင်ကြာ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွား | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
မိုင်းတုံမြို့တွင် နမ့်တုံချောင်းရေလျှံမှုကြောင့် (၅)နာရီဝန်းကျင်ကြာ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွား
Writen by Tachileik News Agency 5:34:00 PM -0Comments
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းတုံမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး နမ့်တုံချောင်း ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် (၃၀) ရက်နေ့ နံနက် (၄) နာရီခွဲခန့်က ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နံနက်(၉)နာရီခွဲအချိန်တွင် ရေပြန်ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နံနက်(၄)နာရီခွဲခန့်က ချောင်းရေလျှံမှုကြောင့် မိုင်းဆတ်-မိုင်းတုံ-မိုင်းပန်ကားလမ်းမရေကျော်ပြီး နောင်ပါရင်ရပ်ကွက် အနိမ့်ပိုင်းရှိ လူနေအိမ်(၃၃)လုံးနှင့် တောင်သူ(၂၁၇)ဦး၏ လယ်မြေ (၃၆၅ .၂၅) ဧက ရေနစ်မြုပ်သွားကြောင်း သိရသည်။
"ဒီနေ့ မနက် (၂) နာရီလောက်ကစပြီး မိုးကသဲသဲမဲမဲရွာတာ။ မနက် (၄) နာရီခွဲလောက်ကျတော့ ရေတွေစတက်လာပြီး မိုင်းဆတ်-မိုင်းတုံ-မိုင်းပန်ကားလမ်းမပေါ် နောင်ပါရင်ရပ်ကွက်နဲ့ ၀မ်နားရွာနားမှာ ရေ(၁)ပေလောက်ကျော်ပြီး နောင်ပါရင်ရပ်ကွက်အနိမ့်ပိုင်းက လူနေအိမ် တွေလည်း ရေ(၁)ပေလောက်ဝင်တယ်၊ တောင်ကျရေဆိုတော့ သစ်ကိုင်းတွေနဲ့အမှိုက်တွေမျောပါလာတာ လမ်းမ ပေါ်တောင်ရောက်တယ်။ မနက်(၉)နာရီခွဲလောက်မှာ ရေတွေပြန်ကျသွားပါပြီ။ လယ်တွေက ရေမြုပ်နေသေးတော့ ပျက်စီးမှုအခြေအနေမသိရသေးဘူး" ဟု ၀မ်နားကျေးရွာနေ တောင်သူ ဦးစုစိန္တက ပြောသည်။
ရေကျသွားပြီးနောက် တောင်ကျရေများစီးဆင်းမှုကြောင့် ကားလမ်းမပေါ်နှင့်တံတားတွင် တင်ရှိနေသော သစ်ကိုင်းနှင့် အမှိုက်များအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောမူးလာ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနေအောင်နှင့် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးသောမတ်ဦးဆောင်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများက ၀ိုင်းဝန်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးထားကြေ၇ာင်း သိရသည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းရွာသွန်းသည့်မိုးရေချိန်မှာ (၃. ၀၃)လက်မရှိကြောင်း သိရပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်
လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် နေအိမ်အဆောက်အအုံများ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိကြောင်း သိရသည်။
ဓါတ်ပုံ - စိုင်းအောင်ထွေး
မိုငျးတုံမွို့တှငျ နမျ့တုံခြောငျးရလြှေံမှုကွောငျ့ (၅)နာရီဝနျးကငျြကွာ ရကွေီးနဈမွုပျမှုဖွဈပှား
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး) မိုငျးတုံမွို့၌ မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးပွီး နမျ့တုံခြောငျး ရကွေီးရလြှေံမှုကွောငျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျ (၃၀) ရကျနေ့ နံနကျ (၄) နာရီခှဲခနျ့က ရကွေီးနဈမွုပျမှုဖွဈပှားပွီး နံနကျ(၉)နာရီခှဲအခြိနျတှငျ ရပွေနျကသြှားပွီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
နံနကျ(၄)နာရီခှဲခနျ့က ခြောငျးရလြှေံမှုကွောငျ့ မိုငျးဆတျ-မိုငျးတုံ-မိုငျးပနျကားလမျးမရကြေျောပွီး နောငျပါရငျရပျကှကျ အနိမျ့ပိုငျးရှိ လူနအေိမျ(၃၃)လုံးနှငျ့ တောငျသူ(၂၁၇)ဦး၏ လယျမွေ (၃၆၅ .၂၅) ဧက ရနေဈမွုပျသှားကွောငျး သိရသညျ။
"ဒီနေ့ မနကျ (၂) နာရီလောကျကစပွီး မိုးကသဲသဲမဲမဲရှာတာ။ မနကျ (၄) နာရီခှဲလောကျကတြော့ ရတှေစေတကျလာပွီး မိုငျးဆတျ-မိုငျးတုံ-မိုငျးပနျကားလမျးမပျေါ နောငျပါရငျရပျကှကျနဲ့ ဝမျနားရှာနားမှာ ရေ(၁)ပလေောကျကြျောပွီး နောငျပါရငျရပျကှကျအနိမျ့ပိုငျးက လူနအေိမျ တှလေညျး ရေ(၁)ပလေောကျဝငျတယျ၊ တောငျကရြဆေိုတော့ သဈကိုငျးတှနေဲ့အမှိုကျတှမြေောပါလာတာ လမျးမ ပျေါတောငျရောကျတယျ။
မနကျ(၉)နာရီခှဲလောကျမှာ ရတှေပွေနျကသြှားပါပွီ။ လယျတှကေ ရမွေုပျနသေေးတော့ ပကျြစီးမှုအခွအေနမေသိရသေးဘူး" ဟု ဝမျနားကြေးရှာနေ တောငျသူ ဦးစုစိန်တက ပွောသညျ။
ရကေသြှားပွီးနောကျ တောငျကရြမြေားစီးဆငျးမှုကွောငျ့ ကားလမျးမပျေါနှငျ့တံတားတှငျ တငျရှိနသေော သဈကိုငျးနှငျ့ အမှိုကျမြားအား ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးစောမူးလာ၊ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးနအေောငျနှငျ့ မွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးသောမတျဦးဆောငျသော ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ နယျမွခေံတပျမတျောသားမြားက ဝိုငျးဝနျးရှငျးလငျးဆောငျရှကျပေးထားကွရောငျး သိရသညျ။
ယနေ့ နံနကျပိုငျးရှာသှနျးသညျ့မိုးရခြေိနျမှာ (၃. ၀၃)လကျမရှိကွောငျး သိရပွီး ရကွေီးရလြှေံမှုကွောငျ့
လူ၊ တိရစ်ဆာနျနှငျ့ နအေိမျအဆောကျအအုံမြား ထိခိုကျပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုမရှိကွောငျး သိရသညျ။
ဓါတျပုံ - စိုငျးအောငျထှေး